Atsy La Réunion : hiara-hihira amin’ny ankizy i Baba | NewsMada
Atsy La Réunion : hiara-hihira amin’ny ankizy i Baba
Tontosaina, atsy amin’ny Nosy La Réunion, ao amin’ny tanàna antsoina hoe Bras-Fusil, ny « Festival Lofaka » andiany faharoa, mandritra ity faran’ny herinandro ity. Ny mahagaga, misy ifandraisany amin’ny teny malagasy « faka » na fototra ny niavian’ity hetsika iray ity. Tanjona mantsy ny hanome lanja indray ny fototra niaingana, ny faka nipoirana eo amin’ny tontolon’ny mozika.
Araka izany, hahazo vahana ny maloya sy ny sega mandritra ny « Lofaka ». Hanana ny fotoana ho azy koa ny avy aty amintsika. Ho vahinin’ity hetsika ity i Baba, mpanakanto heverina fa tsy zovina amin’ny maro intsony. Hanasongadina ny bahoejy sy ireo gadona hafa mampiavaka antsika izy.
Ny tena hahaliana, hiara-hihira amin’ny ankizy miisa 70, avy ao amin’io toerana io, ity mpanakanto malagasy ity, anio hariva. Fantatra fa efa nianatra ny sasantsasany amin’ny hiran’i Baba ireto ankizy ireto. Ankoatra an’i Baba, hampahafantatra ny mozika nentim-paharazana any ihany koa ny tarika malagasy antsoina hoe Tsara Joro.